Maamulka Degmada Howlwadaag oo la wareegay deeq daawo ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka Degmada Howlwadaag oo la wareegay deeq daawo ah
Maamulka Degmada Howlwadaag oo la wareegay deeq daawo ah
Maamulka Degmada Howlwadaag ayaa maanta la wareegey deeq daawo ah oo loogu tala galey xarunta Hooyada iyo dhallaanka ee Degmada.
Deeqadan oo aheyd daawo loogu talagalay inay ku shaqeyso xarunta Hooyada iyo dhallaanka Degmada Howlwadaag ayaa Guddoomiyaha Degmada Cabdikariin Cali Kaar uu kala wareegay Hay’ad lagu magacaabo Freight for humanity oo ka shaqeysa arrimaha samafalka kadib munsaabad kooban oo lagu qabtay xarunta Degmada Howlwadaag, taasi oo ay goobjoog ka haayeen qaar ka mid ah dadka Degmada.
Dr Cabdullaahi Xaashi Abiib oo ah Agaasimaha guud ee Hay’adda deeqdan daawada ah soo gaarsiisay Degmada Howlwadaag ayaa sheegay in dawooyinkan loogu talagalay Hooyada iyo dhallaanka Degmada, isla markaana loogu adeegi doono bulshada.
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag ee Gobolka Banaadir ayaa balan qaaday in deeqda daawada ah lasoo gaarsiiyay ay si siman uga faa’iideysan doonaan shacabka Degmada oo uu sheegay inay qabaan baahiyo badan oo dhanka caafimaadka ah.
Previous articleWasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa Dalka Filand
Next articleXisaabiyaha Guud ee Qaranka oo xilka la wareegtay